Abdibashir Ali (Maxamed Xirsi)
Qisadii Al-itixaad iyo Cabdullaahi Yuusuf
Qoraaga ayaa daabacay, Stockholm, 2007
ISBN: 91-631-8291-2 -
Qiimaha: 10.00 Euro
Buuggan waxaa lagaga sheekaynayaa, dhacdo xus mudan oo soo martay qaybo ka mid ah bulshada soomaaliyeed. Waa dagaal qarxay 19 juun 1992kii oo dhexmaray ururkii la odhan jiray Al-itixaad Al-islaami iyo ururkii la odhan jiray SSDF oo uu hoggaaminayey Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Goobtu waa Boosaaso. Buuggu wuxu u qoranyahay hab sheeko ah oo lagu qurxiyey dareenkii qofka laga soo weriyey. Waxaa la soo bandhigayaa qof goobjooge ahaa wixii uu kala kulmay dagaalka iyo waayo aragnimadiisii.
Cabdibashiir Cali (Maxamed Xirsi) waxa uu qoray buugaag dhowr ah oo aad u muhiim ah. Buugaagtaas waxaa ka mid ah buugga Dáyarta Sweden oo aad loo jeclaystay iyo buug runtii dad badan baskaxdooda ka shaqaysiiyey hurdadiina ka kiciyey oo la yidhaa Dumar talo ma laga dayey.
Akhriste - 2007-06-25 12:36:51
maxamed saleban cumar - balicalanle02@hotmail.com
wallaahi faallo kamaq bixin karo waayo carradayada ma uu soo gaadhin inta ogaalkay ah,markaas waxaan ku talin lahaa in nala soo gaadhsiiyo